Kulan Looga Hadlaayay arimaha Burcadbadeeda oo Ka Dhacay Bosaaso(Sawiro) • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Kulan Looga Hadlaayay arimaha Burcadbadeeda oo Ka Dhacay Bosaaso(Sawiro)
Masuuliyin ka socotay Dowaldda Puntland,Gudoomiyaha gobolada Puntland iyo Isimo ayaa maanta kulan ku yeeshay xarunta guriga gobolka ee magaalada Bosaaso,waxaana ay kaga hadlaayeen arimaha Burcadbadeeda iyo sidii loola dagaalami lahaa.
Waxaa kasoo qaybgalay Wasiirka dekaddaha iyo gaadiidka Badda Puntland Siciid Maxamed Raage,Gudoomiyaha gobolka Mudug Col.Axmed Cali Salaad,Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdi Xirsi Cali Qarjab,Gudoomiyaha gobolka Bari Cabdixaafid Cali Yuusuf,Garaad Maxamuud Shirwac,Beeldaaje Cali Faarax iyo Xirririyaha Ciidanka NATO ee ku sugan Xeebaha Soomaaliya iyo Dowladda Puntland Cabdirisaaq Duceysane.
Garaad Maxamuud Shirwac oo ugu horeyntii ka hadlay kulankaasi ayaa sheegay in goobaha ay ku suganyihin kooxaha Burcadbadeeda ay Xukuumada u dirto dad ka wacyigeliya hadiina ay arintaas surtagelin go’adoon lagu sameeyo oo looga hortago Badda iyo dhulka,sidoo kale Garaad Maxamuud Shirwac wuxuu canbaareyey warbixintii guddiga Qaramada Midoobay u xilsaartay arimaha Soomaaliya ee ku aadanayd in masuuliyinta Puntland ay xirrir la leeyihin Burcadbadeeda.
Beeldaaje Cali Faarax Maxamuud ayaa soo dhoweeyey in la isaga kaashado la dagaalanka Burcadbadeeda maadama u sheegay in ay dhibaato ba’an ku hayaan dhulka Soomaaliya.
Gudoomiyaha gobolka Mudug Col.Axmed Cali Salaad oo ka mid ahaa masuuliyinta ka hadashay kulankaasi ayaa sheegay in laga marmaan ay tahay in lala dagaalamo Burcadbadeeda,wuxuuna sidoo kale xusay in maamulkiisa uu wado qorsheyaal uu kula dagaalamaayo Burcadbadeeda ku sugan xeebaha degmada Garacad ee gobolka Mudug.
Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdi Xirsi Cali Qarjab ayaa isagu ka warbixiyey kulan dhowaan ay la qaateen Ciidanka Badda NATO oo ka dhacay xeebta degmada EYL,wuxuuna sheegay in arimaha ay ka wada hadleen ay qayb ka ahayd in ilaa sideed saldhig oo lagala dagaalamo Burcadbadeeda laga sameeyo inta u dhaxeysa Laasqoray iyo Garacad.wuxuu xusay in maamulka gobolka Nugaal iyo Shacabka ay si aad ah wax ka qabteen Burcadbadeeda.
Gudoomiyaha gobolka Bari Cabdixaafid Cali Yuusuf ayaa ku dhawaaqay in Ciidamada Badda NATO iyo Xukuumada Puntland ay isku afgarteen in ay la dagaalamaan Burcadbadeeda oo ay iska kaashan doonaan.
Wasiirka dekaddaha iyo gaadiidka Badda Puntland Siciid Maxamed Raage ayaa digniin u diray cid weliba oo gacan siisa Burcadbadeeda isagoo ku hanjabay in lasoo qaban doono oo la xiri doono.
”…Waxaan uga digayna Burcadbadeeda in ay joojiyaan waxaa ay wadaan,waa sidoo kale u digaaya cida gacan siisa in lasoo qaban doono..”,ayuu yiri Wasiirka.
Kulankaan ayaa gaba gabadiisa la isku afgartay in la iska kaashado la dagaalanka Burcadbadeeda Soomaalida ayadoo masuuliyinta maamulka Puntland hore ku dhawaaqeen in ay la dagaalamayaan Burcadbadeeda.